HIM | Health in Myanmar » 2015 » February
အသစ်ထွက်မည့် စမတ်ဖုန်း HIV ပိုး ရှိမရှိ စမ်းသပ်ပေးမည်
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: DVB, HIV, နည်းလမ်း
စမတ်ဖုန်းမှာ ပါတဲ့ App ဟာ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီကိုသာမက တခြား လိင်ဆက်ဆံရာက တဆင့် ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေကိုလည်း စမ်းသပ်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်ကျစရိတ်က ၃၄ ဒေါ်လာပဲ ရှိမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မန္တလေး ဗဟို အကျဉ်းထောင်အတွင်း အမျိုးသား တစ်ဦး သေဆုံး
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: AIDS, HIV
ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၅) ရက် နေ့ (၁၃း၀၀) အချိန်တွင် မန္တလေး ဗဟို အကျဉ်းထောင်တွင် မန္တလေးခရိုင် တရားရုံး၊ အမှု အမှတ် (၁၁၄/၁၁) ပြစ်မှု ပုဒ်မ ၃၀၂ (၁) (ခ) အရ ပြစ်ဒဏ် တစ်သက် ကျခံလျက်ရှိသော အကျဉ်းသား ထောင်ဝင်အမှတ် ……. ဦး…… (၃၄) နှစ်သည် HIV/AIDS ရောဂါဖြင့် ထောင်တွင်း ဆေးရုံသို့ တင်ပို့ ကုသစဉ် သေဆုံး သွားကြောင်း
Can the Asia-Pacific region get rid of malaria by 2030?
Can the Asia-Pacific region get rid of malaria by 2030? This isagreat question. The challenges are great. And so would be the payoff. My question is different. What would need to change in Myanmar for elimination to become possible? Jamie ++++++++++++++++++ FEATURE-Can Asia-Pacific region get rid of malaria by 2030? – TRFN Astrid […]
New director of the Union programme
The Union programme is an important one for many patients in Mandalay and around it. Here isapress release on the new director. Jamie ++++++++++++++++++ Meet Dr Bala Thandan: Country Director, Myanmar The Union 17 February 2015 A surgeon who entered public health to work with NGOs and health ministries in several countries on […]
This article in the Burmese language is related to these two documents. https://www.dropbox.com/s/mbthxpa4vpcghm7/Myanmar-FP-Best-Practices-Conference.pdf?dl=0 https://www.dropbox.com/s/zkncskv93xg86qb/WHS_14.pdf?dl=0 Jamie ++++++++++++++++++ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ကလေးမွေးဖွားမှု အသက် ၁၅ နှစ်ကနေ ၁၉ နှစ် ကြားမှာ ရှိတဲ့ ဆယ်ကျော်သက် မိန်းကလေးငယ် ပေါင်း ၁၆ သန်းခန့် နဲ့ အသက် ၁၅ နှစ်အောက် ဆယ်ကျော်သက် ၁ သန်းခန့်လောက်ဟာ နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်း ကလေးမွေးဖွားနေကြတယ်။ အများစုဟာ ဝင်ငွေအနည်းဆုံး နိုင်ငံတွေနဲ့ဝင်ငွေ အလယ်အလတ်ရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ ဖြစ်နေကြတယ်။ အသက် ၁၅ နှစ်နဲ့ ၁၉ နှစ်ကြားရှိ ဆယ်ကျော်သက် မိန်းကလေးငယ်တွေ သေဆုံးကြရတဲ […]
AIDS ရောဂါ အကြောင်း (၂)
Author: HimBur | Category: Myanmar, လူတိုင်းအတွက်1 comment | Tags: AIDS, HIV, နည်းလမ်း, ပညာပေး, ဒေါက်တာမြင့်မြင့်ခင်
ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း လုပပ်နေကျဖြစ်တဲ့ လူမှု ဆက်ဆံရေး ကိစ္စများမှာ ထိတွေ့ခြင်းကြောင့် မကူးနိုင်ပါ။ ဥပမာ အတူတူနေခြင်း၊ အတူတူစားခြင်း၊ အူတူ ကစားခြင်း၊ လက်ဆွဲ နှုတ်ဆက်ခြင်း၊ ဒါပြင် အစားအစာ၊ ရေ၊ ပိုးကောင် မွှားကောင် (ဥပမာ ခြင်ကောင် ကိုက်ခြင်း) အိမ်သာ၊ အများသုံး ခွက်များ၊ အများသုံး တယ်လီဖုန်း၊ အများသုံး ရေကူးကန်၊ ချွေးနဲ့ မျက်ရည်များမှ တဆင့်လည်း မကူးနိုင်ပါ။
Can too many free and subsidied condoms actually reduce access to condoms?
I read through the article with the above title & the attached case study but was still not sure I could answer the question posed by the title ofablog post from PSI Impact. The title has been changed to “Can too many free and subsidized condoms actually harm markets?” Yes. Jamie ++++++++++++++++++ Can […]
ART/ARV ဆေးသောက်မှ အဆင်ပြေမယ်လို့ ရေးထားတဲ့ စာတွေတွေ့ပါတယ်။ သောက်နေတဲ့ ဒီဆေးတွေကကော ကျွန်တော့်ရောဂါအတွက် အထောက်အကူဖြစ်ပါသလားဆရာ။ ဒီဆေးတွေအပြင် ART ဆေးပါ သောက်သင့်ပါသလား။ ဆေးများသွားတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါသလား။ ART သောက်မှဖြစ်မယ်၊ အခြားဆေးမရဆိုတဲ့ စာတချို့ကို ရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရပြီး ကျွန်တော် အမှန်တကယ် တုန်လူပ်နေမိလို့ပါ။
ADB project implementation?
Has the ADB HIV project stalled? The text below is from the ADB website. The funds were approved overayear ago. Has any implementation taken place? Jamie ++++++++++++++++++ 46490-001: Greater Mekong Subregion Capacity Building for HIV/AIDs Prevention Status of Operation/Construction or Implementation Progress A hand-over mission is planned in October 2014, andaspecial […]
Waiting to hear from the UNAIDS Global Advocate for Zero Discrimination
This week we will all be subjected to cute butterflies and calls for “zero discrimination” as 1 March has been declared some kind of day against discrimination. It has beenalong time since we heard from Suu Kyi about any kind of discrimination. It has been over two years since she was appointed as […]